Myat Shu - နှလုံးသားစာမျက်နှာ
You are here : Myat Shu » Archives for နှလုံးသားစာမျက်နှာ
Published By Myat Shu On Friday, August 12th 2011. Under နှလုံးသားစာမျက်နှာ
သူမကို စတွေ့ချိန်က မိန်းကလေးတွေ အလှသွေးကြွယ်ဆုံး အချိန်ဆိုတဲ့ ညနေ နေရီချိန်လည်း မဟုတ်သလို မနက်ခင်း နေခြည်နုနု ဖြာချိန်လည်း မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ တကယ်တော့ နေ့လယ် အပူဆုံးအချိန်မှာပါပဲ။ ကောင်မလေးက မန်းလေး တက္ကသိုလ် လေးထပ်ဆောင်က လှေခါးရင်း တစ်ခုမှာ ထိုင်နေခဲ့ချိန်…။ ကျုပ်ကတော့ အဲဒီ လှေကားတွေပေါ် အတက် တွေ့လိုက်တာပါပဲ။ သူမကတော့ ကိုယ့်အာရုံနဲ့ကိုယ် အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့ပုံ..။ ကျုပ်ကတော့ ဘာညာမဟုတ် တစ်ချက် ကြည့်လိုက်ရုံအပြင် မရှိပေမယ့် သူမရဲ့ ထူးခြားတဲ့ မဲ့တော့မလို ပြုံးတော့မလို ခပ်ထူထူ နှုတ်ခမ်းကို သတိထားမိလိုက်တယ်။ ကြည့်ကောင်းတယ် ဆိုတဲ့ ခံစားချက်၊ နောက် တဆက်တည်း ခပ်ငယ်ငယ် မိန်းကလေး ဘာအတွက်များ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Tuesday, July 19th 2011. Under ၀တ္ထု, နှလုံးသားစာမျက်နှာ
ကျွန်တော် ဆရာဝန်တစ်ယောက်ပါ။ အခုလိုပြောလိုက်လို့ ဟိုချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး ကြော်ငြာမလို့လား ဆိုပြီးလို့တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ တကယ်တော့ အခုဆက်ပြောမယ့် အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေလို့ ကျွန်တော်ဟာ ဘာလဲဆိုတာကို ကြိုပြီး ပြောထားတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဆရာဝန်အများစုဟာ နှစ်ရှည်လများတက်ရတဲ့ ကိုယ့်ဆေးကျောင်းက လူတွေနဲ့ပဲ စာကျက်ဖော် စာကျက်ဖက်၊ ကျူရှင်တက်ဖော် တက်ဖက်၊ ခရီးထွက်ဖော် ထွက်ဖက် စတဲ့ ဆေးကျောင်းတက်စဉ် ကာလမှာလုပ်ရတဲ့ အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းအရာတွေ အောက်မှာ အချင်းချင်း သံယောဇဉ်ငြိတွယ် ချစ်ကြိုးသွယ်ကြတာ ဓမ္မတာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီထဲကမှ ကျွန်တော်ကတော့ ခွဲထွက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ဆေးကျောင်းက မဟုတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်နဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း ရေစက်ဆုံပြီး ချစ်သူတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူက ကျွန်တော့်ထက် အသက် ၄ နှစ်ကျော်ကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်က ... Continue Reading
(၁) ကျနော့်ရှေ့တည့်တည့်တွင် ယဉ်၏ အမျိုးသားထိုင်နေသည်။ နံဘေး တဖက်တချက်တွင် ယဉ်နှင့် ယဉ်၏ ယောက္ခမတို့ ထိုင်နေသည်။ အလယ်တွင် ထမင်းဝိုင်းရှိသည်။ ကျနော်က ယဉ့်အမျိုးသားကို ဖျတ်ကနဲ ကြည့်သည်။ ထိုလူက မရိပ်မိသော်လည်း ယဉ်က ကျနော့်အကြည့်ကို သိသည်။ ကျနော့်အကြည့်တွင် ငါ့ထက် သူက ဘာ သာသလဲဟူသော နာကျည်းသည့် အတွေးကို ယဉ်က အလုံးစုံဖမ်းမိအောင် ပါးနပ်သည်။ တကယ်က ရုပ်ရည်မသာသည့်တိုင် မိန်းမတစ်ယောက်အတွက် ဘဝအာမခံချက်ပေးနိုင်မည့် ပစ္စည်းဥစ္စာဓနတော့ ထိုလူက ကျနော့်ထက်သာပါသည်။ ရင်သည် စူးကနဲ နာသည်။ ဟင်းခွက်ကို လက်အနှိုက်တွင် ထိုလူနှင့် လက်ဆုံသည်။ တကယ်ဆိုလျှင် ယဉ့်ကို ကျနော် ဟင်းခပ်ထည့်ပေးချင်ပါသည်။ ရင်ဘတ်သည် ပိုမိုစူးရှ နာကျင်သောကြောင့် ... Continue Reading